Warbaahinta danwaa Media Network » Maamulka Xamar oo Wada Abaabul Dagaal Kii oogu Culsaa Abid oo kuwajahan Kismaayo(xog culus) Home wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu-header', 'theme_location' => 'primary', 'depth' => 2, ) ); ?>
Nin la xiray 1,500 oo jeer iyo Warbixin aan idin kaga diyaarinay XOG: Maxaa kala soctaa shuruudaha hor yaalla Ra’iisul wasaaraha cusub Shirkado danaynaya dekedda Kismaayo Murashaxii loo Saadaalinayay in uu Noqdo Raisul Wasaaraha Dalka Soomaaliya oo ku Geeriyooday Magaalada Muqdisho!! Mr Saacid oo Xilkiisa ku waayay Heshiisyo lala galay markii la Magacaabayay uu ka baxay(Maxaa kamid ah?) blog analytics
Maamulka Xamar oo Wada Abaabul Dagaal Kii oogu Culsaa Abid oo kuwajahan Kismaayo(xog culus)
July 20, 2013 - Written by Maamulka - Edited byMaamulka Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo abaabul dagaal oo xoogan oo ka dhan magalada Kismayo.
Abaabulkan dagaal oo ah mid aan qarsoodi ahayn ayaa waxa uu ka socdaan xarumaha xukuumada fedaraalka ee Soomaaliya gaar ahaan xafiiska raisul wasaare Saacid oo isu isu waa qaawiyay dagaal kadhan ah Dowlada Jubba-land.
Waxaa magaalada ka socda ciidan aruurin balaaran ayada oo ciidamada halkaasi lagu uruurinayo ay ka koobanyihiin ciidamadii ku dhaawacmay dagaalkii Kismayo oo bogsaday iyo ciidamo laga kala keenay gobolka Gedo iyo gobolada Jubooyiinka.
Sida ay warbaahinta Jubbaland u hadasha u xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ciidamadani ay dowlada Soomaaliya ku uruurinayso Muqdisho ayaa waxa ay halkaasi uga soo bixi doonaan Doomo ah kuwa dheereeya oo loogu tala galay la dagaalanka burcad badeeda.
Saraakiisha iyo odayaasha gobolka Gedo ee wada abaabulkan dagaalka ka dhanka ah Kismayo oo uu hogaaminayo Suldaan Bashiir Madoobe Yarow ayaa waxa xalay afar u sameeyay raisul wasaaraha dowlada fedaraalka Cabdi Shirdoon Saacid.
Ila wareedyada ayaa sheegaya in abaabulka dagaalkan la doonayo in lagu qaado Kismayo uu imika marayo heer gabagaba ah/
Dhanka kale dowlada fedaraalka ayaa wada qorsha ay ku xaqiijinayso in ciidamada Kenya aysan ka qayb qaadan dagaalka Kismayo ay dib ugu qabsanayso ciidanka Dowlada Jubba-land.
Maamulka Xamar ayaa haatan u diyaar garoobay in ay mar labaad isku dayaan in ay gacantooda soo gasho caasimada Dowalada Jubba-land ee Kismaayo oo dhawaan kaba la’aan laga saaray Maleeshiyaadkii Maamulka Xamar.
Dhanka kale ciidamada Dowalada Jubba-land ayaa heegan oogu jira sidii ay cashar ogou dhigi lahayeen cid kaste oo ku soo xad gudubta ciida Jubba-land.
Filo mar walba Wararka Gobalka
Last reply was 4 months ago	yoocaale	View
run ahanti waan loo guntadaa difaac juboland state
Reply	Daaroodman	View
asc difaaca JUBALAND waa muqadas.Deegaankaaga difaaco waa aayaha jiilka kaa danbeeya.Ha noolaato JUBALAND ha noolaato PUNTLAND,soon wanaagsan.
Reply	abdirizack	View
imaada hadiyada ayaaan ka sugaynaaa xamar insha alah waana la idin ka reebay waxaad wadaaaan wabilaahi towfiq
Reply	jugta culus	View
Maamulka xamar cashar ayan udigiDoona insha allah
[VIDEO] OMG!!!…R. Kelly and Lady Gaga “doing It” Live on stage….a must seeeDecember 2, 2013
Daawo:Waa Kuwee Dumarka Ragooda Qanciya XiligaDecember 2, 2013
Hassan Shiekh oo u Sacabo Tumay Xilkii Laga Xayuubiyay Saacid Soona DhaweeyayDecember 2, 2013
Dhag-dheer Dhimataye Cirkiiyow Soo Daruureeyee (Milicsi Saacid iyo Jubba-land)December 2, 2013